Edere site Tranquillus | Jan 6, 2018 | Mmepe onwe onye
Na-enye gị nsogbu mgbe niile site n'ichegbu onwe gị kwa ụbọchị? Bụrụ onye na-elekọta ya. Ekwela ka nsogbu site na mmetọ na nhụjuanya na-emetụta gị.
Ngosipụta a nke enweghị nchebe nke nwere ike ime ka ị ghara ịzọ ụkwụ n'oge ọ bụla: aka ọsụsọ, ihu uhie, ncheta ncheta, ọbụlagodi ụjọ. Onyinye dị mkpa a na-ekwu n'ọnụ ndị isi gị? Ajụjụ ọnụ nke ndị ahịa dị mkpa ma ọ bụ nyocha ọrụ? Ma ọ bụ ọbụna ọrụ gị kwa ụbọchị ... ọtụtụ ọnọdụ ndị na-etinye gị na "nrụgide" na nke na-eme ka ị ghara inweta ego gị.
Mụta otu esi edozi ya ekele maka ntughari ntughari nke m na-enye gị na vidiyo nke 3 min. Vidiyo nwere ike ịnweta nke ga - enyere gị aka imeri ọnọdụ obi erughị ala ị nwere ike ịnweta.
Na vidiyo a, ị ga-ahụ ndụmọdụ na ndụmọdụ ndị ga - enyere gị aka izere nrụgide site n'ịmụta otu esi edozi ya ..., na ihe niile dị na 5 naanị:
1Ntị : mara banyere nchegbu gị na ime ihe iji kwado ya
2) Ihe Egwu : Ọ dị adị n'ezie? Ebee ka uche gị na-eche ya?
3) Nwee obi ụtọ : kwado ụbụrụ gị ịchọrọ ịga ebe ahụ ma mee ka nsogbu ahụ ghọọ egwuregwu! Ee ọ ga-ekwe omume ...
4) Ịmara otú ị ga-esi kwuo mba : mụta dozie ókè gị ma mee ka ha nụ gburugburu gị.
5) Ị mmetụta : mee ka ha chee na ha dị njikere na-aga n'ihu.
Nwee obi ike ugbu a ma chekwaa onwe gị.
Igodo 5 nke nwere ike inyere gị aka ịchịkwa nchegbu ma zere nsogbu November 21st, 2018Tranquillus
GỤỌ Otu esi akwado ịrịọ maka nkwalite
-esonụAtụmatụ Okwu Atụmatụ Nke Mbụ-Akwukwo Ozi nke Gold
Otu esi akwado ịrịọ maka nkwalite